Gacan-jabis Talo & Tutorial: Samee Isticmaal Inta badan gacan-jabis
1. gacan-jabis Settings
2. gacan-jabis 10 Tricks
3. gacan-jabis Rip DVD, Beddelaan inay AVI / MKV / ...
4. gacan-jabis Alternative
Technology ayaa si weyn u siyaadinay boqortooyadiisa ka mid ah filimada iyo qabsaday videos. Waxaad ka heli doontaa kamaradaha of tayo sare leh oo ay awoodaan in ay qabsadaan videos xalinta sare. The videos cayriin ood yeelan doonaan size badan haddii aan Tifaftirayaasha. Waxaad u baahan tahay qalab ku cadaadisaa aad videos qaababka kala duwan. Gacan-jabis waa qalab weyn oo si transcode faylasha aad qaababka kala duwan. Waxaa diyaar u ah MAC, Linux, iyo Windows. Waa barnaamij il furan in ka dhergin doonaa shuruudaha inta badan dadka. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan, laakiin xanbaarsan fursado badan oo qoto dheer.
Just heli gacan-jabis tutorial ama hage gacan-jabis hoos ku qoran.
1. Beddelaan kasta Video
Doorasho gacan-jabis default waa MP4. Waxa si fudud loo ciyaaray karo hindisooyin badan mobile in ka mid ah iPhone, iPad iyo iPod. Si kastaba ha ahaatee, waxa haddii aad rabto inaad ku raaxaysatid movie shaashad weyn? Waxaad isticmaali kartaa gacan-jabis si loogu badalo aad movie in qaab MKV u tayo sare video Deji ciyaaryahanka Blu-ray.
Fiiro gaar ah: Ogow badan oo ku saabsan Sida loo Copy DVD in AVI Isticmaalka gacan-jabis .
2. Settings gacan-jabis Picture
Qabsashada ratio dhinaca filimada ah halka lagu kaydiyo ee DVD ah, waa wax muhiim ah in ascertaining tayada video ah. Waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah goobaha ku jira liiska hoos-hoos Anamorphic ay ku jiraan fursadaha of adag (Waayo kulan saxda ah ee video baaxadda), dabacsan (si fiican u habaysaa video baaxadda), Custom (u xusay kuu gaar ah la doonayo video size).
Fiiro gaar ah: Read this article on Sida lagu Helo ka Settings gacan-jabis Best .
3. U dheellitir Video Quality
Waxaad qabsato karo tayada video ah oo ay la qabsado farsamooyinka riixo ah, sida H.264 si fudud koobi videos of 4 ilaa 8 size GB oo kaliya 1GB. Markaas waxaad ku raaxaysan karaan filimada kala duwan ee DVD kaliya.
Waxaad sameyn kartaa in aad video sida "Size waaweyn File", "Web filaayo" ama "iPod 5G Support" si la isugu dheellitiro aad video dhexeeya tayada iyo baaxadda file. Iyo codec video sidoo kale laga beddeli karaa sida H.264, MPEG - 4 iyo MPEG - 2.
4. Settings soco Audio
Calan codec ka audio in AAC haddii ay suuragal tahay halka mixdown sida caadiga ah waa Dolby Pro Logic II. Calan heerka tusaalaha ah in ay ama Auto ama 48. Sida caadiga ah sare goobaha ay ka fiican tayada audio noqon doonaa.
Dhibaatada dhabta ah ee luuqada baxdo marka aad daawashada filimka shisheeye. Si kastaba ha ahaatee, halkii dhegaysato codad loogu magac daray, dad badan oo jeclaan lahaa in lagu daro subtitles oo maqla codad dhabta ah ee jilayaasha. Gacan-jabis ka dhigayaa suurto gal ah in aad ku gubi subtitles ay la socdaan filimka.
6. ayna of Video qalabka kala duwan
Waxaad dooran kartaa presets ka darsin ah presets heli karo. Just guji "Options" oo Midigta hoose ee interface ah, ka dibna waxa aad sameyn kartaa presets default ama dib presets dhisay-in. Sida caadiga ah default horena waa "caadi ah".
Sidoo kale waxaad samayn kartaa presets kuu gaar ah ku habboon caddaymaha aad. Haddii aadan rabin in presets ah, riix "saar" si ay u tirtirto. Waxa kale oo aad tirtiri kartaa horena caadiga ah, laakiin marka aad ku shuban gacan-jabis marka xiga, waxaa dhici kara in si toos ah dib-u-abuuray markii socda.
7. Kulanka Xiisaha Leh Window
Feature ugu weyn ee gacan-jabis ah waa in ay ku shaqeyn karin DVDs in Dufcaddii. Sidaas waxa aad sameyn kartaa DVD badan ee isku midka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay in ay suuqa kala Kulanka Xiisaha Leh iyaga AIDS-ka ee kala bixinta dooxeen ka Dufcaddii kala duwan ee DVD.
Waxaad encode karaa muunad gaaban ka 10 seconds in dhowr daqiiqo ku eegaan waxa video eegi doonaa sida isticmaalaya goobaha aad hadda. Falanqeynta qaadan kartaa dhawr ilbiriqsi daqiiqo ama 2 ilaa encode.
8. Waxqabadka Window iyo Log (WinGUI)
Waxaad riix kartaa Waxqabad Daaqad ee toolbar si ay u abuurtaan WinGUI. Suuqa ayaa ku tusi doonaa wax CLI muujinaya. Habkaani wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u leh dadka isticmaala sare si ay ula socdaan waxa ka socda gudaha gacan-jabis ah inta la Deji videos ugu soo galay qaabab kala duwan.
9. X264 Options in gacan-jabis
c Waxaad ka heli kartaa fursado badan gudaha nooc kasta oo video coder u toggling iyo banaankiisaba. Haddii encoder ee gacan-jabis, waxaa jira tab sare uu furmo suuqa ugu weyn ee ka halkaas oo aad si fudud ku dari kartaa fursadaha x264 la badhamada graphic qurux badan. Waxa aanu ku siin gacanta si horena x264 in kastoo. Fursadaha Tune ayaa sidoo kale naafada ah. Waxaad u cilinta karo gacanta inkasta.
10. Anamorphic in gacan-jabis
Anamorphic in gacan-jabis loola jeedaa farsamada ee Deji image qalloocan ku kaydsan DVD ah, oo ay ku hagaya in ciyaaryahanka uu u Fidiyo video ah marka aad u ciyaaro.
Howshaan waxay soo saartaa image screen ballaaran aad ku raaxaysan filimka qaab aad u fiican hadda. Ka fiirso sawirada hoose xusayaan natiijooyinka iyadoo la isticmaalayo anamorphic. Sawirka sare ayaa la fidiyey si kor loogu qaado tayada ilaa xad.
Marka la soo koobo, gacan-jabis yahay oo ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee video riixo on DVD. Waxay bixisaa dabacsanaan si ay u habee video ah siyaabo kala duwan iyadoo ay audio, video, codka, iyo goobaha xal u ciyaaro. Waxaa si weyn loo dabaqi la nooca tricks iyo talooyin in siinayaa adeegsigii.
> Resource > Beddelaan > 10 Tricks u leh adeegsiga Inta badan ee gacan-jabis ah